1. ယနေ့ခေတ်, မျက်နှာပုံသဏ္havingာန်ရှိခြင်း ဒါမှမဟုတ် V-chef မျက်နှာ ဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်ဒီခေတ်သစ်မှာခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုကြည့်နေတယ် Pangpuri လိုလှပတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ယူပါ စူပါစတားလိုပဲ ၎င်းသည်လူငယ်များ၏အိပ်မက်ဖြစ်သည် လူအများစုကမျက်နှာပြောင်နေသည့်ပြfaceနာနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေသော“ မျက်နှာကြီးကြီး” ဟုလည်းလူသိများသည် ဒါမှမဟုတ်တချို့လူတွေကဓာတ်ပုံရိုက်တာ၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွင်သင်သည်လှပသောအသွင်သဏ္ဌာန်ရရှိရန်နှင့်မည်သူမဆိုယင်းကိုအခက်အခဲမရှိပြုလုပ်နိုင်စေရန်သေချာစေရန်မျက်နှာအလေးချိန်ကိုမည်သို့ဆုံးရှုံးရမည်ကိုကူညီရန်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များရှိသည်။
2. မျက်နှာကြွက်သားများကိုပုံမှန်လေ့ကျင့်ပါ၊ တစ်နေ့တာပြုလုပ်နိုင်သည့်လွယ်ကူသောလေ့ကျင့်ခန်းများ။ သို့မဟုတ်အပန်းဖြေရန်လိုအပ်သည့်အချိန်များတွင်အိပ်ရာမဝင်ရမီ မျက်နှာအလေးချိန်ဆုံးရှုံးရန်နည်းလမ်းအဖြစ်အရေးကြီးသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်ပါတယ် ရိုးရှင်းတဲ့အဆင့်တွေရှိတယ်။
3. နှစ် ဦး စလုံးဘုရားကျောင်းအပေါ်ညင်ညင်သာသာစွန်ပလွံအားဖြင့်စတင်ပါ။ ထို့နောက်မေးရိုးကိုတင်းမာစေရန်သွားများကိုတင်းတင်းဆုပ်ထားပါ။ ကြွက်သားများကိုစိတ်အေးအေးထားစေရန်ဗိမာန်တော်ကိုပတ် ၀ န်းကျင်လည်ပတ်မှု3သို့ပေါ့ပေါ့ဆဆနှင့်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်သင်၏လက်ဖဝါးကိုဖိထားပါ။
4. ဒုတိယ pose နှင့်အတူ Continue ကျွန်ုပ်တို့၏ cheekbones နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ညွှန်းကိန်း၊ အလယ်နှင့်လက်စွပ်များကိုညင်ညင်သာသာနေရာ ချ၍ စတင်ပါ။ ထို့နောက်နူးညံ့စွာပြုံးပါ။ ပါးပြင်ပေါ်ရှိလက်ချောင်းသုံးချောင်းအားလုံးကိုညင်သာစွာ နှိပ်၍ ၅ စက္ကန့်ကြာအောင်ကိုင်ပြီး ၁၀ ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ။
5. တတိယနေရာမှာဆက်လုပ်ရအောင်။ ပါးစပ်ကိုအဓိကလက်ဖြင့်ဖုံးထားပါ ထိုအခါပါးမာနထောင်လွှားပါစေ ထို့နောက်ပါးစပ်ထဲရှိလေကိုဘယ်ဘက်ပါးသို့ရွှေ့ပါ။ အနားယူရန်၊ အလှည့် ၁၀ ခုလုပ်ရန်လက်ျာပါးသို့ရွှေ့ပါ။
6. နောက်ဆုံးအနေအထားမှာပါးနှစ်ဖက်စလုံးကိုသင်၏ပါးစပ်ထဲသို့စုပ်ယူပြီးသင်၏ပါးစပ်ကို ၅ စက္ကန့်ကြာအောင်ထားရန်ဖြစ်သည်။ လုပ်ရန်လွယ်ကူသောဖြစ်ခြင်းအပြင် 10 တစ်ခုချင်းစီကိုအနေအထားတွင်နောက်ကျောနှင့်အလှည့်လုပ်ပါ။ နှင့်မည်သည့်ခက်ခဲပစ္စည်းကိရိယာများမပါဘဲ ပုံမှန်ပြုလျှင် မျက်နှာတစ်ဝိုက်အဆီလျှော့ချပေးသည် မျက်နှာအသားအရေကိုလျှော့ချရန်၊ ကြွက်သားများသို့အသွင်ပြောင်းရန်လွယ်ကူသောပုံစံဖြင့်ပုံဖော်ပါ။ အရေးကြီးသည်နေ့စဉ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်တွဲဖက်ပြုလုပ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။
7. ရေပိုသောက်ပါ ကိုယ်ခန္ဓာ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်လုံလောက်သောရေသည်မျက်နှာ၏ကိုယ်အလေးချိန်လျော့နည်းစေရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကလတ်ဆတ်မှုကိုဖန်တီးပေးလို့ပဲ အစာခြေစနစ်ကိုကူညီပါ ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတိုင်းရဲ့ဆဲလ်တွေကိုလတ်ဆတ်စွာပုံမှန်လုပ်ပြီးပုံမှန်အလုပ်လုပ်ပါ လူအတော်များများကအဲဒါကိုနားလည်မှုလွဲနေကြတယ် ရေအများကြီးသောက်သုံး မျက်နှာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ဖောများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် တကယ်တော့ဘယ် တစ်နေ့လျှင်ရေ ၆ ခွက်မှ ၈ ခွက်သောက်သည်။ အထူးသဖြင့်လက်ဖြင့်မစားမီ။ သောက်သုံးရေတစ်ခွက်ကိုမြှင့်ပါ သငျသညျကိုယ်အလေးချိန်ကူညီပေးနေအပြင် လန်းဆန်းစေသောခန္ဓာကိုယ် အစားအစာနည်းနည်းစားပါ ဒါ့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လတ်ဆတ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်း
8. အချိုရည်နှင့်အရက်ယမကာများစားသုံးခြင်းကိုလျှော့ချပါ။ ပါတီလိုင်းများသည်သူတို့၏ဘဝများကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်သည် အချိုးအစားအတွက်လှပသောမျက်နှာရှိချင်တယ် အရက်ကခန္ဓာကိုယ်ကို dehydrates ကြောင့်ဖြစ်သည် မျက်နှာမျက်နှာရောင်ရမ်းခြင်း အရေပြားတောက်ပသည်အထိအနည်းငယ်သောက်ပါ၊ သို့သော်လေထုထဲတွင်ပျော်မွေ့ပါစေ။ ကောင်းသောကျန်းမာရေးအတွက်အေးသည်
9. အစာစားပြီးအနားယူပါ။ မျက်နှာအားလုံးကိုယ်အလေးချိန်နည်းလမ်းများထက်အခြားအားလုံးအထက် ဖိုင်ဘာပါသောအစားအစာများကိုရွေးချယ်ခြင်း ပြီးတော့ပရိုတင်းကောင်းကောင်းအားလုံးအရေးကြီးတယ်။ သကြားနည်းတဲ့ပန်းသီး၊ လုံလောက်စွာအနားယူရန်အရေးကြီးသည်။ သင့်အသားအရေနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ် ပြီးတော့ကမ္ဘာ၏နားလည်မှုနှင့်အတူနေထိုင်ပါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့စွမ်းအင်ဖြည့်စွက်ပါ။ ဒါကမခက်ဘူး၊ အာရုံစိုက်ပြီးသင့်ဘဝအကြောင်းကိုပဲသတိထားပါ။ ကျနော်တို့ကြည့်ဖို့အကြံပြုထားတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့မျက်နှာကိုယ်အလေးချိန်နည်းစနစ်များယူဆောင်လာရန်ကြိုးစားပါ။ တောက်ပသောမျက်နှာနှင့်အသားအရေရှိခြင်းအတွက်